टिप्स Archives - Technology Khabar
थाहा पाईराख्नुस्, यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ कम्प्यूटर वा ल्यापटपबाट हराएको फाइल
३२ असार २०७५, सोमबार १९:१०	Leaveacomment
काठमाडौं । कम्यूटर तथा ल्यापटपमा मानिसहरुले आफ्ना सबै महत्वपूर्ण डाटाहरु राख्ने गर्दछन् । जसमा फोटो भिडियो, डकुमेन्टहरु राखिएका हुन्छन् । कहिलेकाँही यस्ता महत्वपूर्ण डाटाहरु अचानक डिलिट हुने वा हेलचेक्रयाईँ गर्दा हराउने गर्दछ भने कहिले अपरेटिंग सिस्टम क्र्यास हुँदा तपाईँको महत्पूर्ण डाटाहरु हराउने गर्दछ । यस्तो बेलामा तपाईँलाई निकै तनाब हुन्छ र त्यो डाटा कसरी फेरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान ...
१८ असार २०७५, सोमबार १३:३६	Comments Off on वर्षामा पानीबाट यसरी जोगाउनुस् आफ्नो मोबाइल फोन, मोबाइल भिजेमा यी काम गर्दै नगर्नुस्
काठमाडौं । यो वर्षको मनसुन अर्थात वर्षातको मौसम शुरु भएको छ । यस्तो बेलामा तपाईको मोबाइल फोनलगायतका अन्य ग्याजेट पानीमा भिज्न सक्छ। पानीले भिजेपछि ति ग्याजेट कामै नलाग्ने बन्न सक्छन। त्यसैले,यस्ता बस्तु हरुलाई पानीबाट जोगाउन समयमै साबधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा तपाईको मोबाइल फोन वर्षात अवधिभर सुरक्षित बनाउन यी उपायहरु उपयुक्त हुन्छन् । मोबाइल फोन भिज्नबाट यसरी जोगाउनुस्- इयरफोनको ...
१६ असार २०७५, शनिबार ०७:१२	Comments Off on तपाईँको स्मार्टफोनमा कसैले निगरानी त गरेको छैन् ? यी उपायबाट थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौं । स्मार्टफोन यूजरका लागि आजभोली स्मार्टफोनको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । हरेक दिन डाटा चोरी भएको वा हराएको समाचारहरु आई नै रहेका छन् । फेसबुकजस्ता ठूला कम्पनीहरुले समेत तपाईँको स्मार्टफोनको हरेक गतिबिधिलाई निगरानी गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना डाटाको सुरक्षाले सँधै चिन्तित बनाउँछ । तपाईँको आफ्नो डाटा चोरीबाट बच्नको लागि तपाईँ अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ । ...
होसियार ! यस्तो छ फ्री इन्टरनेट-बिटक्वाइन दिने भन्दै मोबाइलमा आक्रमण गर्ने भाइरस
१३ असार २०७५, बुधबार १२:३६	Comments Off on होसियार ! यस्तो छ फ्री इन्टरनेट-बिटक्वाइन दिने भन्दै मोबाइलमा आक्रमण गर्ने भाइरस
काठमाडौं । यदि तपाईँ एन्ड्रोयड मोबाइल फोन यूजर हो भने सावधान हुनुहोस् । कतै तपाईँको स्मार्टफोनलाई नयाँ भाइरसले आक्रमण गरेको त छैन् ? हालै पत्ता लागेको एक भाइरसले मोबाइलमा तपाईँको नियमितरुपमा जासुसी गर्नुका साथै तपाईँको हरेक गतिबिधिहरुलाई रेकर्ड गर्दछ । तपाईँले गरेको टेक्स्ट म्यासेजलाई समेत इन्टरसेप्ट गर्नुका साथै मोबाइलबाट साउण्ड तथा स्क्रीनको समेत रेकर्ड गर्दछ । हालै ईसेट (Eset) ले ...
३ असार २०७५, आईतवार १६:१०	Comments Off on स्मार्टफोनमा स्क्य्राच भयो ? घरमा नै उपलब्ध टूथपेष्टले यसरी स्क्रीन चम्काउनुहोस्
काठमाडौं । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरु अधिकांश समयमा आफ्नो प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । स्मार्टफोन कुराकानी गर्न मात्र होईन की गेम खेल्नदेखि च्याटिंग गर्नसम्म प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर पनि स्मार्टफोनको सुरक्षा र प्रयोगमा ध्यान दिँदैनन् । अझ स्मार्टफोनको स्क्रीनको सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएपनि त्यसमा ध्यान दिएको पाईँदैन् । यसको सबैभन्दा संवेदनशिल स्क्रीनमा निरन्तर प्रयोग गरेपछि विभिन्न किसिमका स्क्य्राचहरु देखिने गर्दछ । ...
मोबाइलबाटै स्मार्ट लाइसेन्सकाे जानकारी लिन सकिने, यसरी एसएमएस गरेर थाहा पाउनुस्
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १३:४६	Comments Off on मोबाइलबाटै स्मार्ट लाइसेन्सकाे जानकारी लिन सकिने, यसरी एसएमएस गरेर थाहा पाउनुस्
काठमाडौं । तपाईँले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि प्रकृया सकेको महिनौं बितेपनि तपाईँको स्मार्ट लाइसेन्स लिन निकै कुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा तपाईँलाई आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र कहिले आउँछ भन्ने जानकारी लिन कार्यालयमा नै धाउने गर्नुभएको छ भने अब यातायात कार्यालय जान नपर्ने भएको छ । यति मात्र होईन परिक्षाको रिजल्ट र अन्य जानकारी पनि आफ्नै मोबाइलबाट लिन सकिने भएको ...
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १४:१९	Comments Off on मोबाइल फोन सफा गर्दा यी उपायमा ध्यान दिनुस, तपाईँको फोन सँधै नयाँ देखिन्छ
काठमाडौं । तपाईँले बजारमा विभिन्न किसिमका स्मार्टफोनहरु छानीछानी किन्न सक्नुहुन्छ, जून विभिन्न फीचरयुक्त रहेका हुन्छन् । स्मार्टफोन किनेर त्यसको प्रयोग गर्ने मात्र होईन की त्यसको सुरक्षा र सरसफाई पनि निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । यसको सुरक्षा र सरसफाई सही तरिकाले गर्नुभएन भने यो छिटै बिग्रन सक्नेहुन्छ । वैज्ञानिकहरुले पनि स्मार्टफोनको सरसफाईमा ध्यान नदिँदा लाखौं करोडौं जिवाणुहरु फोनमा हुने गरेको पाईएको ...
२० जेष्ठ २०७५, आईतवार १५:३०	Comments Off on मोबाइल फोन हरायो वा चोरी भयो ? यसरी डिलीट गर्नुस् फोनको डाटा
काठमाडौं । तपाईँले प्रयोग गरिरहनुभएको मोबाइल फोन कहिँ कतै घुम्न जाँदा हराउने वा चोरी हुन सक्दछ । अधिकांशको फोन यात्रा गर्दा हराउने वा चोरी हुने गर्दछ । मोबाइल फोन हराउनु वा चोरी हुनुभन्दा पनि त्यसमा भएको विभिन्न किसिमको तस्विर, भिडियो, डकुमेन्टहरुको चिन्ता तपाईँ हामीलाई हुने गर्दछ,जुन स्वभाविक हो । अहिलको स्मार्टफोनमा हामीमध्ये धेरैजसोले हरेक डकुमेन्ट तथा डाटालाई स्टोर गरेर राख्ने ...
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १४:२५	Comments Off on इन्टरनेट स्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यी उपायबाट बढाउनुहोस् इन्टरनेटको स्पीड
काठमाडौं । दिनप्रति दिन इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढिरहेको छ । हाल तिब्र गतिको ब्रोडब्याण्ड सेवा वा वाईफाई सेवा नेपालका अधिकांश शहरी क्षेत्रहरुमा उपलब्धताले गर्दा यसको माग समेत बढिरहेको छ । तर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुको गुनासो यसको स्पीड घटेको वा नचलेको रहने गरेको छ । यदि तपाईँको ब्रोेडब्याण्ड वा वाईफाई डाटा कनेक्शनको स्पीड कम छ वा पटक पटक घटबढ भईरहन्छ भने ...